Linus Torvalds uye yake gumi nemaviri ekutsoropodza tekinoroji | Linux Vakapindwa muropa
12 kutsoropodza kweLinus Torvalds matekinoroji
Isaac | | General, Misangano / Zviitiko / Hurukuro
Linus Torvalds, iye mugadziri weLinux kernel, ndiye mumwe weanonyanya kuzivikanwa mavara muprogramu nekomputa yechiitiko. Asi kwete chete yekuve mumwe weakanakisa programmers munhoroondo, asi nekuda kwezvaanogara achipokana uye nezvematongerwo enyika zvisirizvo zvirevo zvaakatijairira. Vazhinji vanoona hunhu hwake zvisina kunaka, asi zvinosetsa kuti pane vanhu vakadaro mune zvematongerwo enyika.
Theo de Raadt mumwe wevatungamiriri veakavhurwa sosi mapurojekiti ane zvakare akaomarara hunhu, zvakare Steve Jobs (senge zvakanyanya kana zvishoma) aive munhu asinganzwisisike, pachokwadi, vanhu vazhinji vakakurumbira munhoroondo vane kana kuve neavasina kujairika mavara. Asi izvo isu zvatinoda kuratidza muchinyorwa chino gumi nemaviri ekushoropodza kwakaitwa naLinus kumabasa ehunyanzvi:
ARM SoC: iye musiki akataura kusagutsikana kwake nemaARM SoCs, achisvika pakutaura kuti «Ndinovimba vagadziri veSoC ARM vanofa mutsaona inorwadza zvisingaite. […] Gaah, Varume chinhu chese cheARM chinorwadza pakurwadziwa nembongoro.".
C ++: Iyo C ++ chirongwa chemutauro chakashoropodzwa, kwete naLinus chete, asiwo nevamwe vakaita saRichard Stallman. Ivo vanobheja pane chimwe chinhu chinyakare, senge C. Uye zvikonzero zvavo zvichave ne… Nezve iye akataura kuti «Chokwadi ndechekuti, maC ++ makomputa haana kuvimbika (nekuda kwekubata kwavo kwakasarudzika). […] C ++ mutauro unotyisa".
GCC: iyo quintessential compiler paLinux, yakashoropodzwawo naLinus. Izvi hazvisi zvisina kujairika, taona kuti Linus haatombo tsoropodza kugovera, mapurojekiti anoenderana nesystem yake, vagadziri vakaita saNVIDIA, nezvimwe. ZveGNU compiler iwe wati «GCC inoyamwa»About imwe yeshanduro yeiyi.
GNOME: iyo inozivikanwa desktop desktop yakatovewo akabatwa mamwe emashoko akashata aLinus. Pane izvi anofunga kuti «... chikonzero chandinowana GNOME ichiganhurirwa ndechekuti inis ». Kana «Ini handisati ndasangana nemumwe munhu anofarira gehena remhirizhonga iri GNOME 3".
GNU Hurd: Inorwadziswa ndiyo tsanga iyo GNU yaisati yambove nayo uye haizombove nayo pane ino mwero. Zvakawanda zvataurwa nezve chirongwa ichi uye Linus haina zvishoma: «Ndinofunga Hurd afa ... "" Hurd haisi microkernel chaiyo, iye chinhu chinosemesa chinoita kuti mamwe ma microkernels aite seasina kunaka.«. «Pazasi mutsara: iti HAPANA ZVINODZIDZISWA, uye pamwe hausi kuzopedzisira sevanhu vaHurd".
GNU Emacs: iro rakakurumbira chinyorwa mupepeti rinoshandiswa paUNIX uye Unix-inoda, kusanganisira Linux, yakavewo yakanangwa nemutauro weTorvalds. «… Huwandu husingaperi hwetsoko dzinonyora muGNU Emacs hahuzomboite chirongwa chakanaka.«. «… Emacs… chishandiso chadhiyabhorosi.".
HFS +: iyo faira sisitimu yakagadzirwa neApple yakashoropodzwa nemusiki weLinux. «… OS X mune dzimwe nzira yakaipa kupfuura Windows pakuronga. Yako faira system yakazara uye yakazara marara«. «Zvinotyisa chaizvo zveHFS + hazvisi munzira yekuti harisi dhairekitori rakakura, asi nenzira iyo rakagadzirirwa kuti ive yakaipa faira nevanhu vakafunga kuti vane mazano akanaka.«. «Kutaura chokwadi, HFS + ingangove yakaipa kwazvo faira iyo yakambovapo. Kristu chii fuck icho ......
Java: mutauro wechirongwa wakagadzirwa neSun Microsystems muna 1995, ndiye anogamuchira zvirevo zvakaita se: «Chaizvoizvo ndinoona injini yeJava ichitsvedza, hapana kwairi kuenda.»«Yakarasikirwa yakawanda yekugona kwayo muchikamu nekuda kwenzira iyo Sun Microsystems yaakabata nayo«. «Java haina basa kwandiri, mutauro unotyisa zvakadii!«
Machine: Iyo microkernel yakatanga kutsiva BSD, yakashandiswa nhasi sehwaro hweMac OS X mukutarisana nekusagona Steve Jobs akawanikwa kuhaya Linus Torvalds kuita Linux iyo OS X kernel, yakanganisa, zvirinani mumaziso aTorvalds. «Maonero angu eMach haana kunyatsonaka. Kutaura chokwadi, chidimbu cheshit. Iine zvese zvekukanganisa dhizaini iwe zvaunogona kugadzira, kunyangwe zvakakwanisa kugadzira zvimwe zvake«. «Ini ndinochengetedza kuti vanhu vaMach ... mapenzi asina kugona.".
MINIX: iyo Unix-senge inoshanda sisitimu yakagadzirwa nepurofesa paUniversity yeAmsterdam uye kuti iwe unozonyatso ziva, iyo yakashanda sekurudziro kwaLinus kugadzira Linux kugadzirisa zvikanganiso zvayo, zvirokwazvo yakashoropodzwa. «Linux ichiri kukunda MINIX munenge munzvimbo dzese". Achitaura nezvaPurofesa Andrew Tanenbaum, akagadzira MINIX, akati: 'Basa rako ndere kuve mudzidzisi uye muongorori: Iyo gehena yechikonzero chakanaka chevamwe veUMINIX-akakuvadzwa uropi. ".
Solaris: Iyo ndeimwe yeakanakisa mashandiro esisitimu, akagadzirwa neSun uye mukwikwidzi akaomarara kuGNU / Linux, kunyangwe nguva pfupi yadarika yakapfuurwa neyekupedzisira. Linus Torvalds anofunga kuti «Solaris / x86 idambe ...«. «Vanhu vazhinji vachiri kuda Solaris, asi ini ndiri mumakwikwi anoshanda navo, uye saka ndinovimba vanofa.".
XML: W3C, mubatanidzwa unobata HTML, yakagadzirawo mutauro wekukodha magwaro anonzi XML. Asi pane izvi, Linus anofunga zvisina kunaka: «Iyo ingangove yakasarudzika fomati yakamboitwa […] uye inowanzove njodzi yakazara.«. «XML inoyamwa. Chaizvoizvo. Hapana zvikonzero. XML inosemesa kupatsanurwa nevanhu kunyangwe yemakomputa. Iko hakuna chaiko chikonzero ichi chinotyisa huripo chiripo.".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » 12 kutsoropodza kweLinus Torvalds matekinoroji
Manuel Cruz akadaro
inoita 6 makore
Pasina mubvunzo kutaura, Linux zvakare iri yekushandisa system chinyorwa, ichivakirwa paUnix inova imwe yemasopu makuru akambogadzirwa, uye zviri chaizvo nekuda kwekusagadzikana kwayo kwatakave nequasi-absolute monopoly yeDos / Windows kwemakumi emakore. Chinhu chega chinogona kuponeswa nezveLinux ndiyo kernel, uye izvozvi zvave kuita zvakawanda zvekare, nekuti mumakore ayo "akakura traffic traffic" yaive yakaipa kupfuura kurova baba. Iyo yakasara ye linux ecosystem inongoratidzira zvinoitwa nevamwe, asi nemapenguin, uye zvimwe zvinhu zvakaita senge yayo manejimendi manejimendi akatyorwa kubvira ma70.
Kurwa pakati pevateveri veEmacs neVi kwakafananidzwa nevateveri vezvikafu zvekudya zvisina tsarukano vanopinda muhurukuro dzisingaperi kuti vaone kuti ndechipi chisina kukuvadza hutano. Ivo vanga vaine imwechete prehistoric, isingadzoreke edhita kwemakore nekuti linux haisati yambove neyakafanira mupepeti kana programming nharaunda, kana vashandisi vayo havadi izvozvo. Ivo vakavharirwa mune yepamusoro eliteist uko kuita zvinhu nemazvo kunotsamwirwa nekuve "mainstream" kana kutengesa chikonzero.
XML yakaipa yakaipa fomati nekuti iri yakavhurika chiyero, saka hapana kutya kuti yakavhurwa sosi mapurojekiti kuishandisa inozotungamira kukwikwidza kubva kune yakazvimirira chikamu. Semuenzaniso, Android inoishandisa uye ndiyo yakashata yemapuratifomu eruzhinji maererano nekuita. Izvo zvakashata zvekuti mushanduro dzichangoburwa ivo vanonyora muchivande XML muchimiro chisina kutyisa, mushure mekusimbisa kuti kupaza XML nemiti kwakakonzera kuti bhatiri reiyo smartphone ripere nekukurumidza kupfuura bhegi rembwa dzinopisa.
Uye chinhu chakaipisisa ndechekuti vanhu vanomanikidzwa kushandisa XML sekunge yaitsiva programming mutauro. Varume, ngatione kana iwe ukaona kuti XML inoshanda chete kushambadzira matafura pane ekuvandudza mashandiro ayo anowanikwa nekukurumidza kana amiswa, sezvinoitika kune PHP uye neakawanda akawanda matekinoroji anotyisa.
Icho chiito icho Linus Torvalds chinoita nemunwe ini ndaizoita nevese gumi. Uye mhosva dzese dzatinofanira kushanda nehunyanzvi uhu hwakajeka ndezvemayunivhesiti eruzhinji, ayo anotungamirirwa nevanhu vanogara zvachose vari vechokwadi munhare yavo yenyanga dzenzou, uye vanoita zvisarudzo zvichibva pamagariro anofanira kuverengerwa se " chirwere chekufunga. "
Pindura Manuel Cruz
Ini ndinofunga zvimwe zvinhu zvaunotaura ndezvechokwadi, asi izvi:
"Hazvina hazvo kutaura kuti Linux zvakare inoshandisa system marara [...] uye zviri chaizvo nekuda kwekusagadzikana kwayo kuti isu takave nehunhu-hwakakwana hutongi hweDos / Windows kwemakumi emakore"
Zvinoratidzika kunge chidiki kwandiri, chaizvo.
Pindura kuna joseluis
Uri benzi handiti?
JOHANI JOSEFA akadaro
Kana mwari angave akarurama
Pindura kuna JUAN JOSE
muponesi muchinjikwa akadaro
-Linux ndiyo inoshanda sisitimu inonyanya kufarirwa nemakambani.
Chidzidzo chakaburitswa neLinux Foundation chinoona kuti makumi masere muzana emakambani anofarira kushandisa mapuratifomu eLinux kune vamwe vakaita seWindows kana Unix mumakore mashoma anotevera.
Iyo isingabatsiri Linux Foundation yakangoburitsa chirevo maererano nekutorwa kwemapuratifomu eLinux, ayo anoita kunge ari kukura achishandisa Windows.
Vanosvika makumi masere kubva muzana emakambani chiuru nemazana mapfumbamwe vakaongororwa vanoti vanofarira kushandisa Linux pamusoro pedzimwe nzira dzakadai seWindows neUnix, chimwe chinhu chavachachengetedza kwemakore mashoma anotevera.
Masangano mazhinji uye akawanda ari kutamira kuLinux kubva kuLinux mapuratifomu, asi pamwe chidimbu chinonyanya kuzivisa ndechekuti makambani ari kutanga kuendesa mhinduro dzavo mugore ari kunyanya kushandisa Linux. Kunyanya, 70,3% vanoshandisa aya mapuratifomu seyekutanga, nepo chete 18,3% ichiisa Windows.
Pamwedzi gumi nemiviri inotevera, 12% yemafemu akaongororwa akati achashandisa Linux pamabasa avo-akakomba emitoro.
"Tinotenda kuti budiriro iri kuwedzera yekutorwa kweLinux mubhizinesi, kunyanya kuti ishandiswe munzvimbo dzakakosha dzebhizimusi, ichaendesa mukusimudzira kweLinux pamwe nekudyidzana mumaindasitiri mazhinji," akadaro Amanda McPherson, mutevedzeri wemutungamiriri wezvekushambadzira uye kukura muSheyo. "Kuve nekunzwisisa chaiko kwekuti Linux iri kuwana nzvimbo pamwero webhizimusi kunobatsira kuzivisa vatengesi nevashandisi nezvekuti vangashande sei pamwe chete kusimudzira zvese zviri zviviri Linux nematekinoroji ayo ainotsigira."
Uye ndeyekuti makambani makuru kwazvo anosarudza Linux sepuratifomu yekugadzirisa mukati megore (76% yemaseva) uye zvakare 74% inoronga kuchengetedza uye kunyange kuwedzera mashandisirwo ayo ezveramangwana gore mukati megore. Nezve munda wezvekushandisa uye masevhisi, zvakare 75% yemakambani anotengesa paLinux.
Nekuda kweizvozvo zvese izvi, iyo pfungwa yeLinux iri kuwedzera kunaka mumusika webhizinesi. 95% yeavo vakaongororwa vanotenda kuti Linux yakakosha kune yavo ramangwana bhizinesi zano. Uye, hongu, semhedzisiro yeizvi, kudiwa kwekudzidziswa kweLinux kuri kuwedzera, sezvo makambani anotarisirwa kutanga kuhaya nyanzvi nyowani dzakadzidziswa mundima iyi mumwedzi inotevera. Mukana webasa uripo.
-Vim imwe yeakanakisa mameseji edhita.
Zvichida vazhinji vanofadzwa nemusoro wenyaya, ivo vachati: zvinosekesa sei iyo yakashata mupepeti yausingakwanise kana kubuda mairi usina kuverenga bhuku remanyowani!
Vamwe vachati, "Sei kuomesa? Kune izvo kune Gedit kana Kate, zvinosekesa sei mupepeti mune mameseji modhi? ndizvo zviriko nano uye zviri nyore kwazvo "
Kunyangwe zvinofungwa nevazhinji, Vim ndomumwe weakanakisa mameseji edhita, kana asiri akanyanya kunaka; Iwe uchashamisika kuti sei ndichitaura izvi, nekuti heano mamwe maitiro ayo:
Vim kana iyo yakatangira Vi yakaiswa nekumisikidza pane ese UNIX-senge masystem, akadai seGNU / Linux, Solaris, OpenSolaris uye maBSD; saka ndiyo yega mupepeti, kuti iwe uve nechokwadi chekuwana chero kwaunoenda.
NeVim unogona kugadzirisa ese marudzi ezvinyorwa, inotsigira syntax kujekesa kweC, C ++, Perl, Bash, HTML, Php, uye mazana maviri syntaxes !!
Vim inopa zvikomborero zvakakura kune mapurogiramu, Vim yakagadzirirwa kugadzirisa purogiramu, ine nzira, kuronga, kuunganidza uye kugadzirisa. Iwe unogona kugadzirisa kodhi yekodhi uye zvakare kufonera yekunze compiler, uye woturikira zvawanikwa. Kana paine zvikanganiso zvekuunganidza, zvinoratidzwa muhwindo. Meseji yekukanganisa inonongedza mushandisi kunzvimbo yavakawanikwa kuitira kuti vagadziriswe.
NaVim hauzombo pfupika kana zvasvika kune zvinyorwa, ine yakanakisa yakasanganiswa rubatsiro, uye akawanda magwaro anowanikwa pawebhu.
Iyo ine yakavakirwa-mukati spell yekutarisa uye zvinyorwa zvinyorwa. (Kuzadzikiswa kwemirairo, mazwi uye mazita emafaira)
Chinhu chinonakidza ndiko kumanikidza uye kudzikisira kwemafaira, izvo zvinoita kuti zvikwanise kugadzirisa mafaira akaomeswa
Pamusoro peizvi, Vim ine runyorwa rwayo pachayo kuronga mabasa matsva
Kune avo vanogadzira LaTeX zvinyorwa "Suit latex ye vim"
Aya maficha achangobva kutumidzwa mazita, anongova mamwe, asi kwete zvese izvo Vim anazvo. Kuti uzive zvese zvakanakira uye hunhu hwevim, isu tinokukoka iwe kuti uzviedze iwe pachako; sekuziva kwevazhinji, Vim haisi edhari kuti nekungopinda isu tatoziva mabatiro. Vim ine kosi inodzika zvishoma pakudzidza kupfuura vamwe vapepeti, asi rega ini ndikuudze kuti kana uchinge wapfuura neiyi vim uchave wako unofarira mupepeti.
-Zvinonzwisisika zvikonzero zvekushandisa maEmac.
Ini ndawana uyu mavara kubva kuEmacsWiki, uye ini ndaona zvichinakidza kuuburitsa pano. Nenzira, ini ndakagadzirawo peji yakatsaurirwa Emacs muChopping Code, uko kwandinozovandudza angu .emacs uye yangu mareferenzi gwara reEmacs.
Hechino chinyorwa, zvikonzero zvinoshanda zvekushandisa maEmac. Kana iwe usati wagutsikana kuti utange kuishandisa, pamwe chimwe cheizvi chinokugonesa:
Emacs ndeyemahara software, wakasununguka kuishandisa chero zvaunoda.
90% yezvatinoita pamberi pekombuta kugadzirisa mameseji (nyora tsamba, chirongwa, nyora magwaro, nyora kuburikidza newebhu, ...), kana tichigona kushandisa "imwechete" yakasununguka mhariri yezvinyorwa zvese izvo isu tinoda kugadzirisa isu tichava vanobudirira zvakanyanya mumabasa edu ezuva nezuva.
Kana iwe uri programmer, emacs ine nzira dzekuti iwe uve unobudirira kwazvo mune chero mutauro. Hapanazve kudzidza mupepeti wemutauro wega wega!
Emacs ndiyo yakanakisa markup mutauro mupepeti (XML, SGML, HTML, nezvimwewo) nezvose izvi zvinoreva.
Emacs chaizvo, inogadzirisika.
Emacs iri nyore kuwedzerwa.
Uchishandisa emacs mukupfuura iwe unodzidza lisp.
Nekudzidza nzira dzeEmacs iwe unodzidza mapfupi ebash.
Kunyangwe Eric S. Raymond anokurudzira emacs !! (neupenzi hwaakaita pazvinhu zvese)
Emacs inovandudza munzvimbo yekutumira mameseji. Ndiyo mupepeti wepamberi!
Emacs ndiye muparidzi weAI hackers.
Neemacs kunyangwe iro remutumbi rinodzidza kuronga.
Mapoinzi akati wandei ane kakuseka, asi zvese izvi zvikonzero zvine musoro zvekutanga kudzidza mashandisiro acho.
-HTML5 iripo uye yemberi yekusimudzira nhare.
Zvese zvinoratidza kuti iyo nyowani vhezheni yemutauro wekutanga webhu ichave yakakosha chinhu mukusimudzira nhare kweanenge makore gumi anotevera. Inonakidza infographic inoongorora zvimwe zvakakosha.
Pakazosvika 2015, chidzidzo chimwe chete ichi chinofungidzira kuti zvikamu makumi masere kubva muzana zvemashandisirwo enhare zvichave zvizere kana zvishoma zvichienderana neHTML80. Iyi pfungwa inotsigirwa nekushanduka kwetekinoroji iyi kana zvasvika pakuwana akawanda maficha aimbove ari ega akasarudzika echizvarwa kodhi. Audio uye vhidhiyo kuburitswa anga ari matambudziko ave kutanga kugadzirisa uye makambani akati wandei, anosanganisira Sencha, appMobi neMozilla, anoenderera mberi achishanda kupa mukana uri nani kubva kuchigadzirwa kusvika kuzvinhu zvakaita seye kamera kana iyo accelerometer.
Munguva yeMobile World Congress muna Kukadzi gore rapfuura muBarcelona, ​​boka remakambani rakauya pamwechete kuti vagadzire iyo Mobile Community Core Web Platform (Coremob), iyo IT munharaunda foramu yekutarisa nekukurumidza shanduko yewebhu uye yakatora iyo tsvimbo muhutungamiriri hwe homogenization yeHTML5. Coremob inosanganisira hofori dzinoverengeka mukuvandudza uye nharembozha, kusanganisira Microsoft, Facebook, Google, Mozilla, AT & T, Red Hat, uye iyo Qualcomm Innovation Center. Pfungwa ndeyekuti HTML5 isvike pakukwanisa kwayo izere, nharaunda yehunyanzvi hwetekinoroji ichafanirwa kushanda pamwechete kugovana zviwanikwa nekuparadzira kuedza
Tichifunga kuti nharembozha ichiri kugadzirira izere neHTML5 ecosystem, chiitiko chakakosha parwendo urwu kwave kuri kusvika kwekuyedza kwekuyera kuyera kugona kwebrowser yekumhanyisa maHTML5 maapp. Apa ndipo panopinda Ringmark, suite yewebhu-based bvunzo dzinoyera kuenderana kweye mobile browser kugona izvo zvinoshandiswa newebhu webhu, zvakagadzirwa seyakavhurika sosi yekushandisa neFacebook yenharaunda yeCoremob. Mune mamwe mazwi, Ringmark inogadza mwero wekutsigirwa webrowser uye kuti ndeapi masimba eanogona kuita mushandisi mune iyo browser. Iyo infographic inoratidza muenzaniso wekugona kwemhete yega yega, uye kuti ndeapi maficha anogona kumhanya pane yega tier.
Mumufananidzo we infographic iwe waunogona kuwana pazasi, inotiratidza ongororo yeHTML5 seyazvino neramangwana rekusimudzira nhare, zvichitibvumidza kufungidzira chikamu cheramangwana chakatimirira.
Iyo ramangwana rekuratidzira paWebhu yakachena CSS.
Pakutanga iyo Internet yaive yakati sandara uye ichinyanya kunyora, iyo mifananidzo yakasvika gare gare, asi pakutanga iyo bandwidth nyaya yaifanira kutarisirwa, nema80s yaive mashoma uye anodhura kushandisa Internet bandwidth, kubatana kwaive nhare uye kunonoka.
Sezvo Internet yakavandudza uye kutaurirana kwakavandudzika, zvirimo zvakava zvine mavara, multimedia yakauya uye chimwe chinhu chakaita kuti mapeji eWebhu anyanye kukwezva: "Mifananidzo".
Vagadziri vaisanganisira maficha aya vakamira uye vakakwanisa kutora vatengi vakawanda, munhu wese aida webhusaiti yavo yehupenyu.
Maturusi akaita seFlash akauya kuzoshandura nyika yeWebhu, aine hunyanzvi uye hwakazara Sisitimu iyo yakatitendera kuti tikwanise mapeji ane mifananidzo inoshamisa uye inokwezva kwazvo. Asi pamusoro pemakore aya chimwe chinhu chisingafungidzike chakaitika, vakatonga kupera kweFlash uye munhu mukuru aive Steve Jobs, musiki weApple. Mabasa akapokana nekushoropodza Flash kwaita nekuda kwekuti maratidziro uye kubata kwese kwewebhu paWebhu kunofanirwa kunge kuri mumabhurawuza, akati kubvuma plugins mumabhurawuza kwaive nenjodzi yekuchengetedza isingagoni kudzorwa. Vagadziri vacho vaifanira kumhanya.
Ndipo ipapo apo shanduko dzeHTML neCSS dzinouya, kusanganiswa kweaya matekinoroji kuri kutozadzikisa mifananidzo iyo inosvika mukufunga kwevashandisi.
Kunze kwechimiro chinowanikwa nemashizha echitaera (CSS), shanduko yeiyi tekinoroji yakawana zvine simba kwazvo uye nyore-kuita zvigadzirwa zvemifananidzo.
CSS Media Queries chimwe chinhu chinobatsira kutsanangura dhizaini pasi pemamwe mamiriro ezvinhu, sekubata akasiyana saizi screen.
Muchidimbu, kana iwe uchida kuve pamberi pewebhu, unofanirwa kupinda muHTML5 NECCS3. Asi ramba uchifunga, nesimba guru rinouya basa rakakura, uye sezvo HTML5 neCSS3 zvichitipa kugona kuita zvinhu zvikuru pawebhu, zvinowirawo zvakanyanya kune vanogadzira mapurogiramu uye vagadziri kuti vazive mabatiro avanogona kuita kuchinhu chinoshandiswa uye chinonakidza. pamberi. Kuti isu hatifanire kutsvaga iyo "Skip intro" bhatani pane peji rega rega ratinowana.
-Sei CSS3 iri iro ramangwana rewebhu dhizaini?
Mazuva ese webhu dhizaini inotipa maturusi matsva uye asinganetsi kuitira kuti ruzivo rwedu paInternet rwunowedzera kunakidza uye kushanda Izvi zvinowanikwa kuburikidza nehunyanzvi hwekuvandudza webhu, uye imwe yeakanyanya simba ndeye CSS3.
Pano iwe uchadzidza kuti nei iyo nyowani CSS3 tekinoroji iri ramangwana rewebhu dhizaini.
Chero akanaka webhu programmer anoziva kuti iyo HTML kodhi inotibvumidza isu kuvaka iyo zvemukati dhizaini yedu yewebhu gwaro uye kuburikidza neCSS inokwenenzesa masheetti emashizha isu tinogona kuumbiridza zvakataurwa zvemukati (Ruvara, chinzvimbo, saizi, mafonti, nezvimwewo.)
CSS3 inopa zvakanyanya kuwedzera kutonga kwezvinhu zvewebhu gwaro uye huwandu hwakawanda hwezvitsva zvitsva mukati mekugadzirwa kwewebhu.
Aya mikana anoverengeka kubva mukugadzira anoshamisa ekuona mhedzisiro yekugadzira epamberi mifananidzo, ese akagadzirwa nemitsara mishoma yeCSS3 kodhi.
Hapasisina HUPENYU hwekuti CSS3 ichave iri nyowani nyowani inozotonga marongero ewebhu, uye munhu iyeye anoda kuzvipira kuita webhu kuvandudza uye asina kuvandudzwa neiyi nyowani uye ine simba tekinoroji, achasiiwa kumashure kwevakagadziri vazhinji uye ma programmers avo ichagadzira mawebhusaiti emazuva ano uye nekutenda kwakabudirira mukuitwa kweCSS3.
-Zvakanakira uye Zvakashata zveXML
Nyore inoitwa nevanhu uye software.
Rongedza zvakasiyana ruzivo kana zvemukati kubva pane yako midhi kana fomati.
Yakagadzirirwa kushandiswa mune chero mutauro kana mavara.
Kujekesa kwayo kuri nyore nekuda kwemitemo yakaoma inotonga kuumbwa kwegwaro.
Iyo Nha. Yemhando haina muganho
Iko mukana wekuvaka masisitimu zvinoenderana nezvatinoda zvekutsinhana dhata kunogona kutungamira mukuwandisa kweshanduro dzisingawirirane uye kana izvi zvikaitika, mhinduro yakaunzwa neXML mukutsvaga kuchinjana kweruzivo kwese kunotungamira mukupesana kwayo. Panzvimbo pekubatanidza mutauro wakazara, tinogona kuzviwana isu nemitauro chaiyo iri kuwedzera kubviswa mu "universal".
Pindura Salvador Cruz
Pindura kuna Mirume
Linus Torvalds haisati yambocheka kuita chero chinhu; uye kunyangwe dzimwe nguva achigona kuve nekukasira, anowanzove akarurama pane izvo zvaanotaura, kunyangwe mafomu ake dzimwe nguva asinganzwisisike. bvisa chikonzero chako mune zvakawanda zveizvi.
Pindura kuna Ivan
Linux Torvalds mafungiro akanyatsokwana.
Handisati ndamboona kukosha kwekunyatso kururamisa kuti nditaure. Kungofanana patinotsamwa isu hatina kugadziridza futi. Kutaura zvakaipa kune basa raro, senge chimwe nechimwe chinhu chehupenyu.
Kana chimwe chinhu chiri kubvambura shiti, ndizvo zvazviri uye kuti "izvi hazvisi zvese zvakanaka zvingave" zvichave zvine hunyoro asi hazvireve chinhu chimwe chete, saka iyo dzidziso yenhema yaunoda kutaura nezvayo iri kukutsvinyira uye zvinodzivirira taura zvaunoda.
Saka Linus anosimudza munwe wake (visual aid) uyezve anoti zvakajeka "fuk yu nvidia" :) uye ndiwo meseji.
Kune avo vasingaifarire, unogona kudzima pc kana kuvhara nzeve dzako.
Brian Sanabria akadaro
Ini ndinobvumirana neXML
Pindura Brian Sanabria
Jimmy orano akadaro
Pakati pezvinhu gumi nezviviri izvo Linus Torvalds anonamira munwe wake, ZVANDINOBVUMIRA PANE PANANGO YEXML.
Nekuda kwekuti XML iri yakavhurika chiyero, iyo inokutendera iwe kuti ushandise kudzokororazve kuWordPress XMLRPC uye "kugogodza pasi" chero emamirioni nemamirioni emablog anoshandisa tekinoroji iyi (ine ngozi pazasi pekubatana nevhidhiyo).
ShokoPress rinofungidzirwa kuti iro bhagi rakagadziriswa ASI NDAKAEDZA NEVIRTUAL MACHINES uye zvinoramba zvichiitika.
NDIRI KUSHANDA muDTT kuiisa seWordPress plugin kuitira kuti ese XML iri pingback iyo yaanogamuchira uye ASI KUTEERANA NEZVAKAITIKA nekuti iwe wakakwenya murume, ndinobvisa chigunwe chako paLinusTorvalds. 8-)
ZVIMWE INFO (yakanyorwa nePython): http: / / securityaffairs. co / wordpress / 27409 / kugura / Drupal-drupal-yakakosha-kukanganisa.html
Pindura Jimmy Olano
Unixpad Boka akadaro
Kuti izvi zvakashata, kuti imwe yacho yakanyanya, vakomana, kushoropodza ivo vakanaka, asi kupa? vari nani? nekuti haisi chete nyaya yekushoropodza kushoropodza, kuna Linus Torvalds, uyo anotsoropodza asi anovaka, nekuda kweC ++, Gcc, uye mamwe ma shits sezvavanodaidza, ndezvekuti chimwe chinhu chidiki chakanaka chaitwa, kana pamwe tobva taenderera mberi tichifunga nezve crap senge Microsoft kana Apple? Kwete machinda, regai iyi ive nguva yekufungisisa uye ngatitangei kufunga nezvenzira yekuvandudza zvinhu. ZVAKAGADZIRIRA kwakanaka kwekushoropodzwa kwakachipa zvekuti hakubatsiri chero chinhu kune tekinoroji.
Pindura kuUnixpad Boka
Azure Cloud Shanduko: Kugovera kweLinux kweMicrosoft
DDRescue-GUI, pamberi peiyo Ddrescue yekununura chishandiso